CBD Waxay Xannibi Kartaa Suuxdinta Suuragalnimada iyo Cabsida Ka Jirta Marijuana THC • Dawooyinka Inc.eu
Cilladaha guud ee ay la kulmaan kuwa ku raaxeysta isticmaalka marijuana ayaa ah in sigaar cabista ay ku keento paranoia iyo walaac iyaga. Waxyaalaha cagaaran ayaa markaa saameyn ku yeelanaya maskaxdooda, fikirkooda ka dibna synapses-kooda ayaa ku qarxaya cabsi iyo argagax.
Een dhawaanahan reer Kanadae daraasadda oo lagu daabacay joornaalka 'Neuroscience' wuxuu soo jeedinayaa inay jiraan wax faa'iido leh oo aad cuni karto si aad ula dagaallanto paranoia-ka noocan oo kale ah: cannabidiol of CBD. Iyagoo adeegsanaya moodellada jiirka, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in fikradaha foosha xun ee laga yaabo inaad la kulanto haddii cabitaanka marijuana uusan ahayn muuqaal.
THCXaqiiqdii, Cannabinoid-ka ku takhasusay xashiishadda, wuxuu kiciyaa molikuyuul ku jira hippocampus maskaxda, kaasoo inta badan kaydiya xusuusta, barashada, iyo ururada shucuurta. Marka molikiyuulkaas la hawlgeliyo, ayay soo baxdaa, waxay yeelan kartaa waxyeelo dhanka walwalka ah, niyad jab, iyo dabeecad qabatin leh.
Walaac yar iyo paranoia sababtoo ah CBD
Saynisyahannadu waxay markaa isku dayeen CBD iyo jiirka isla waqtigaas THC inaad ka tanaasusho oo aad ogaato cabsi yar iyo paranoia. Intaa waxaa sii dheer, in hippocampus-ka, molecule-ka uu dayactiray kinase-ka xakameynaya calaamadaha ka baxsan (ERK) oo loo yaqaan heerka waxqabadka caadiga ah. Si aad u sii qeexdo, CBD waxay xannibtay waxyeelada xun ee marijuana 'THC' ay caadi ahaan sababi karto.
Natiijooyinkayagu waxay leeyihiin saameyn muhiim ah oo ku saabsan dawada xashiishadda iyo isticmaalka muddada dheer ee xashiishadda. Tusaale ahaan dadka aad ugu nugul dhibaatooyinka soo raaca xashiishka, waa muhiim in la xaddido isticmaalka noocyada kala duwan ee CBD iyo maadada THC oo hooseysa, ”ayuu yiri cilmibaare iyo borofisar Steven Laviolette
Taasi waxay tiri, saynisyahannadan ma helin heerar hoose oo ah ERK iyo walwal markii ay maamulayaan CBD kaligood. Sida cilmi-baarayaasha Jaamacadda Galbeedku sheegeen, CBD iyo THC waa isku-dhaf si fiican u wada shaqeeya.
"Si kastaba ha noqotee, annaga oo maamulnay CBD iyo THC isla mar ahaantaana, waxaan gebi ahaanba ka leexannay jihada isbeddelka ee heer kulka," ayuu yiri qoraaga hormoodka ah Roger Hudson ee daraasadda, isagoo intaas ku daray "CBD sidoo kale waxay awood u yeelatay inay ka laabato dabeecadaha walaaca iyo balwadda leh. - dhaqan-celin la mid ah dabeecadda uu sababay THC. “
Ilaha waxaa ka mid ah GlobalNews (EN), TheFreshToast (EN), WestWord (EN)
Daraasad tijaabo ah oo ugu horreysay ayaa hadda lagu qabtaa Australia gudaheeda waxtarka daawada ...
Heerlen si dhakhso ah ayuu go'aan uga gaaraa ka qaybqaadashada baaritaanka weedka
Degmada Heerlen ayaa go aan ka gaari doonta rubaca hore ee sanadkaan in la isdiiwaangaliyo iyo inkale ...
Dhaqaale - Qaar baa su'aal ka keenay dhacdooyinka ku xeeran keenista iyo baahida shirkadaha xashiishka ...